Akụkọ EU dọrọ ndị nne na nna aka ná ntị megide inye ụmụaka mmanya na-aba n'anya - Ụwa 2022
Akụkọ EU dọrọ ndị nne na nna aka ná ntị megide inye ụmụaka mmanya na-aba n'anya
Nri mbụ nwata ṅụrụ mmanya ma ọ bụ mmanya, n'ọnọdụ ụfọdụ nke nna na-egbu ahịhịa n'uwe elu nwere ọsụsọ ma ọ bụ karịa na tebụl nri abalị, na-egosi emume a na-eme n'ọtụtụ obodo n'ụwa.
N'ọtụtụ omenala ndị Europe, a ka na-ekwenye na oke mmanya a na-achịkwa maka ụmụaka na-akwalite omenala ịṅụbiga mmanya ókè, ihe dị ka Mediterranean na-aṅụ mmanya na-erughịrị ndị Northerners.
Otú ọ dị, nnyocha ọhụrụ e mere nke EU nyere na-egosi na ọbụna ntakịrị mmanya na-aba n'anya nwere ike ịkpata nsogbu ahụike na-adịte aka na mmepe nke ịṅụbiga mmanya ókè na, n'ime ụmụ agbọghọ, ikekwe ihe ize ndụ dị ukwuu nke amụghị nwa na ọrịa cancer ara. Dr. Aric Sigman, onye òtù Royal Society of Medicine nke United Kingdom, dọrọ òtù EU aka ná ntị “òtù na-arụ ọrụ n’ihe banyere nwata na n’oge uto” megide echiche bụ́ na nchịkwa mmanya dị otú ahụ na-eduga n’ịṅụ oké mmanya.
Nyere na "ọbụlagodi ntakịrị" mmanya na-aba n'anya nwere ike imerụ ụbụrụ ụbụrụ na-eto eto, Sigman dụrụ ndị nne na nna ọdụ ka ha gbuo oge iwebata mmanya na-aba n'anya ụmụ ha ruo mgbe ha ga-emecha, ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe 15 gasịrị. Onye nchọpụta ahụ kwuru na otu nnyocha gọọmentị US kwadoro nke chọpụtara " ka ukwuu” ihe ize ndụ nke ịṅụbiga mmanya ókè n’etiti ndị ṅụụrụ mmanya mbụ ha tupu ha eruo afọ 18. Ọzọkwa, Òtù Ahụ́ Ike Ụwa (WHO) na-ekwu, sị, “Ka mmalite nke ịṅụ mmanya na-egbu oge, otú ahụ ka ọ na-esiwanye ike na ọ bụ mmanya na-aba n’anya. nsogbu na ịṅụ mmanya na-aba n'anya ga-apụta na ndụ ndị okenye."
N'ime ụwa zuru oke, Sigman kwuru, ndị mmadụ agaghị aṅụ mmanya tupu ha eruo afọ 25, mgbe ụbụrụ ruru ntozu okè, n'agbanyeghị na ọ kwetara na 16 nwere ike bụrụ ihe ezi uche dị na ya - karịsịa maka ndị nne na nna na-atụ egwu na mmachibido iwu ịṅụ mmanya n'ụlọ nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma. mmanya na-aba n'anya n'èzí ụlọ.
Sigman tụrụ aro ka EU hazie afọ mmanya n'ụlọ mmanya na ụlọ nri n'ofe Europe, ka ọ dị afọ 18.
"Ichebe ndị na-eto eto anyị pụọ ​​na mmerụ ahụ nke ịṅụ mmanya pụtara na ugbu a, n'ihi ozi ọhụrụ banyere mmetụta mmanya na-aba n'anya, ọ dị mkpa iji nyochaa otú EU dum si ele echiche nke ịghọ okenye na ịṅụ mmanya," ka Sigman kwuru.
Eric Appleby, onye na-ahụ maka Alcohol Concern nke UK, kwuru na ya kwenyere na akụkọ ahụ. "Ọ nwere ike iche na ịme ka ụmụaka ṅụọ mmanya na-aba n'anya n'ebe dị nchebe na nke a na-achịkwa n'ụlọ bụ ihe ziri ezi ime, ma nchọpụta niile na-egosi na onye na-eto eto malitere ịṅụ mmanya, otú ahụ ka ọ ga-abụ na ha nwere nsogbu ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'ọdịnihu. "O kwuru.
Akuko a na-abia n'etiti nsogbu ahuike nke mmanya na-aba n'anya n'etiti ndi ntorobia na UK, na onu ogugu ulo ogwu maka ndi n'okpuru afo 30 kariri okpukpu abuo n'etiti 2002 na 2012, Daily Mail kwuru. Na mkpokọta, ụlọ ọgwụ UK anọwo na-ahụ mmụba nke ụfọdụ nnabata metụtara mmanya 1,000 kwa afọ.
Ndị ọrụ ahụike Britain tụrụ aro ka ndị nne na nna ghara inye ụmụaka mmanya na-aba n'anya, ọkachasị ndị na-erubeghị afọ 15.